Naloa ny vola ary dia avotra soa aman-tsara ny ain’ilay mpiasam-panjakana. Nilaza ny zandary fa tsy nahalàla ny zava-nitranga raha tsy taorian’ny fandoavana ny vola avy amin’ny fianakaviany. Ity izany no kidnapping voalohany izay nitranga teto amin’ny firenena. Lasa fanaon’ny olon-dratsy tanteraka izany ary na ny dahalo mpangalatr’omby aza dia lasa mahay izany raha heloka bevava mpitranga teto Antananarivo fotsiny izany teo aloha.
Raikitra indray ny fitohanan’ny fifamoivozana manerana an’Antananarivo. Herinandro voalohan’ny taona ihany izany no mba nilamindamina dia efa miraikitra indray etsy sy eroa. Mitaraina ireo fiara fitateram-bahoaka ary mangataka ny mba hangalàna fepetra maika satria mihena atsasamanila ny mba tombony kely tokony hidtira amin’izy ireo. Na ny lalam-baovao izay vao vita vao haingana aza dia efa feno fitohanana koa. Midika izany fa tsy voatery ho ny fanaovana fotodrafitr’asa hatrany no mampihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana fa kosa ny fanitsiana ny toe-tsain’ny mpampiasa fiara.
Hofaranana vonjimaika amin’ny 28 febroary izao ny lisi-pifidianana izay eny anivon’ny fokontany. Efa tamin’ny 1 desambra izany no nisokatra ary tokony ho tapitra ny 15 febroary saingy nohalavaina. Vitsy dia vitsy ny olona izay tonga teny amin’ny fokontany ary nanamarina ny anarany na koa nanitsy ny diso. Hatreto dia ny lisi-pifidianana teo aloha ihany hoy ny CENI no hampiasaina amin’izay fifidiana izay manaraka eo. Mbola ahiana hatrany izany ny hala-bato amin’ny fifidianana depiote sy ben’ny tanàna izay hatao amin’ity taona ity satria tsy mba nisy fanintsiana mihitsy ny lisi-pifidianana izay efa fototry ny olona tamin’ny fifidianana farany teo.
FITARAINANA VOARAIN’NY POLISY
Miisa 48 ny fitarainana vokatry ny fanendahana izay tonga teo anivon’ny polisy tamin’ny volana desambra eto fotsiny. Efa betsaka izany kanefa mbola tsy izy rehetra aza satria betsaka koa no tsy mitory satria efa kivy ny amin’izay mety ho tohin’ny raharaha izay matetika dia tsy misy vokany akory. Ny tena betsaka amin’ny fanatontosana ireo asaratsy dia ny zaza tsy ampy taona. Ireo koa dia tsy voatazona ela am-ponja noho ny fisian’ny sampan mpiahy ny zon’olombelona, indrindra fa ny tsy ampy taona, hany ka lasa manararaotra manao asaratsy.
Amin'ny 19 janoary ihany dia ho fantatra ny praiminisitra voalohan’ny fitondràna Andry Rajoelina. Mandritra ny lanonana fihanianana etsy Mahamasina no hahafantarana ny olona hitantana ny governemanta. Raha ny feo mandeha,i Fienena Richard, minisitry ny angovo teo aloha no mety hotendrena praiministra. Efa mandeha sahady ny ady boaty etsy sy eroa satria betsaka tamin’ireo mpanohana azy no mitady io toerana io. Hanomboka amin’io daty voatondro etsy ambony io izany dia efa hisy sahady ny hivadika satria tsy nahazo toerana, raha araka ny kajikajy politika amin’izao.
Balan’ny zandary ihany no nahafaty ny zandary izay namoy aina tato ho ato rehefa nifanehatra tamin’ny dahalo. Nohazavain’ny sekretera jeneralin’ny zandarimaria izany ary nomarihany fa bala very tao amin’ny toerana fanofanana ho zandary tany Ambositra izany. Efa nidoboka am-ponja ny tompon’andraikitra tamin’ny famoahana ireo fitaovam-piadiana saingy misy mitady hamoaka sahady ankehitriny. Tsy hanaiky hatramin’ny farany izany fikasàna izany ny zandary raha ark any nambaran’ny SEG ary manara-maso akaiky ny raharaha, miaraka amin’ny fitsaràna.
Valisoa mitentina 10 taptrisa ariary no homen’ny vazaha iray antsoina hoe Mirela Groth ny olona izay mahita ny alikany “chien de salon”. Napetrany tamin’ny hopitalin’alika iray teto an-drenivohitra izy io talohan’ny nandehanany nanao fetin’ny faran’ny taona tany an-dafy. Rehefa niverina anefa dia efa tsy tao intsony ilay alike ary nolazaina fa very. Tezitra mafy ny tompony satria nandoavany volabe ny fampitazomana io biby io tamin’ilay toerana. Nanapa-kevitra izy ny nanao antso avo mba ho fitadiavana ny alikany ary koa hanome volabe ho an’izay mahita izany